पृथ्वीनारायण शाह भन्ने मान्छे छदै थिएनन् हुदै नभएको काल्पनिक मान्छे को जन्मदिन मनाएर गाईजात्रा नगर्नुस भेडाहरु हो : मुकुन्द घिमिरे - nepal day
पृथ्वीनारायण शाह भन्ने मान्छे छदै थिएनन् हुदै नभएको काल्पनिक मान्छे को जन्मदिन मनाएर गाईजात्रा नगर्नुस भेडाहरु हो : मुकुन्द घिमिरे
प्रकासन मिति : ३० पुष २०७८, शुक्रबार १२:१७
भारतका नापी विभागका महानिर्देशक सर जर्ज एभरेष्टको नाममा नै नेपालको हिमालको नाम माउन्ट एभरेष्ट रहेको उनको तर्क छ । इतिहासमा पृथ्वीनाराण शाहको
जन्म वि।स १७७९ मा भएको उल्लेख छ र महेन्द्रको वि।सं १९७७, महेन्द्रको जन्ममितिको अंक यताउती पारेर पृथ्वीनारायणको शाहको जन्म १७७९ मा भएको भनिएको उनको तर्क छ ।
उनले इतिहासलाई मिलाउन अनेक प्रयास गरिएको बताएका छन् ।
१४ वर्षमा कसरी त्रिभुवनले छोरा पाए होलान् ? मुकुन्द प्रश्न गर्छन् ? यही प्रसङ्ग गंगालाल श्रेष्ठले पहिले पनि उठाएको थिए ।
विंसं २०११ सालमा सुभेच्छुकहरुबाट ४५ हजार रुपैया भेला पारी बेलायतमा श्रीपेज बनाउन अडर दिएको तथ्य बाहिर आएको बेला विंसं १८३१ मा नै मृत्यु भएका पृथ्वीनारायण शाहको शिरमा कसरी श्रीपेच रह्यो भन्ने कुरा पनि विवादास्पद रहेको छ ?
डिल्लीबजारमा भोजन गृह चलाउँदै आएका भरत बस्नेतको फोटोमा नै श्रीपेच हालिएको चर्चा चलेको छ ।
पृथ्वी नारायण शाह सम्बन्धी हुने धेरैजसो कार्यक्रम पनि भोजन गृहमै हुने गरेको छ भने अन्यत्र भएका कार्यक्रमलाई पनि बस्नेतले सहयोग गर्दै आएको जनाइएको छ । राजेन्द्रलक्ष्मीदेवीको तस्बिर भने छाउनीमा रहेको संग्रालयमा क्यान्टिन चलाउने महिलाको भएको हल्लि खल्लि चलेको छ ।
सन्देशलाई यहाँ ल्याएर उपदेश भनिएको छ । अरू केही फरक छैन
उनले भने पृथ्वीनारायण शाहले मेरो साना दुःखले आज्याको मुलुक हैन भनेको कुरा पनि महेन्द्रले बल्लतल्ल लेखेका हुन् । जुन अहिले पढ्न पाइन्छ । ती पृथ्वीनारायण भन्ने को हुन् र कस्ता थिए भन्ने अझैपनि खोजीको विषय बनेको छ ।
राजधानीको केन्द्रविन्दु रत्नपार्कको बारेमा थाहा भएकाहरुको लागि मुकुन्दे नयाँ नाम हैन ।रत्नपार्कको एक रुखमा चढेर भाषण गरिरहेको मान्छे र उसको भाषण सुन्नलाई लालयित भएर
बसेका मानिसहरू केही समयअगाडीसम्म मुकुन्दको परिचय यही नै थियो । तर अहिले मुकुन्देको परिचय फेरिएको छ ।
२२ दिन जेल बसेर २२ हजार धरौटी तिरेपछि मुकुन्दे रत्नपार्कबाट विस्थापित भएर अहिले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आएका छन् ।
विंसं २०३५ सालमा भोजपुरमा जन्मेका मुकुन्द घिमिरेले इन्जिनियरिङमा डिप्लोमा सम्मको अध्ययन पुरा गरेका छन् ।
विआइसिसिको सरकारी जागिर छाडेर उनी एकाएक रत्नपार्कमा भाषण गर्न पुगे ।
३५ वटा वसन्त काटिसक्दा पनि विवाह नगरेको मुकुन्द राजधानीको घट्टेकुलोमा बसोबास गर्दछन् । कतिले मुकुन्दलाई पागलको संज्ञा दिएतापनि उनमा भएको ज्ञान प्रशंसा भने सबैले गर्ने गर्दछन् , के राजनीति, के धर्म के दर्शन के साहित्य के इतिहास सबैमा उनको दख्खल प्रशंसनिय रहेको